စိတ်ထားတူညီချက်ကြမယ် | Food Magazine Myanmar
စက်တင်ဘာလမှာတော့ ဆရာမဒေါ်နန်းစန်းစန်း အေးက ‘ကြက်သားစပါးလင်ချက်’ အပါအဝင် ဟင်းလျာအတွဲအစပ် (၇)မျိုးကို စီစဉ်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ ဟင်းလျာအတွဲအစပ်များကတော့ –
၁။ ပုစွန်ငရုတ်သီးဟင်း၊ သခွားသီးကြက်သွန်မြိတ် ဟင်းရည်အေး၊ ကြက်ဥ ကညွတ်ကြော်၊ ခရမ်းချဉ်သီးထောင်း၊
၂။ ဝက်သားစဉ်းပင်စိမ်းဟင်း၊ ဖရုံသီးဟင်းရည်၊ ရှောက်သီးသုပ်၊ ငရုတ်သီးမိုးမျှော်တောင့်
၃။ ငါးပတ်ခေါင်းမုန်လာဥချဉ်ဟင်း၊ ကြက်သားမွှ ငရုတ်သီးအစပ်ကြော်၊
၄။ ဆိတ်သားမဆလာနှပ်၊ ကျောက်ပွင့်သုပ်၊ အသင်း ပဲဟင်းရည်၊ မန်ကျည်းသီး ငါးပိထောင်း။
၅။ မှိုဘဲသားအချိုပေါင်း၊ သီးစုံအချဉ်ဟင်း၊ ပဲလိပ်ပြာနှပ်၊ ငါးပိကြော်၊ သခွားသီးတို့
၆။ မြစ်ငါးဒန်ဆားနယ်ချက်၊ အာလူးအကြေကြော်၊ ဒန့်သလွန်ရွက်ဟင်းချို၊ ပဲပုပ်မီးကင်ထောင်း၊ အတို့စုံ
၇။ ကြက်သားစပါးလင်ချက်၊ ဘူးသီးကြော်၊ မှိုဥသုပ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိချက်၊ တို့စရာ
အဆိုပါ ဟင်းလျာအတွဲ အစပ် (၇)မျိုးထဲမှ ကြက်သားစပါးလင်ချက်၊ ဘူးသီးကြော်၊ မှိုဥသုပ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိချက်၊ တို့စရာတို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
‘တို့တွေတစ်လကို ပိုက်ဆံငါးထောင်စီလောက် စုထားရအောင်’
‘ရသမျှ အကုန်သုံးနေကျကိုပဲ အထူးအဆန်းပါလား။ ဘာလဲ ခရီးထွက်မှာမို့ လိုတာဝယ်ဖို့လား . . . .’
‘ငါးထောင်များ လိုတာဝယ်ဖို့ ဘာမှမရဘူး။ ဒီမှာ နောက်များမကြာမီမှာ သိန်းတစ်သောင်းတန်ဆုပါတဲ့ထီ ဖွင့်တော့မှာတဲ့။ တစ်စောင်ကို ငါးရာဆိုတော့ တစ်လကို ဆယ်စောင်ထိုးမှာ . . . ‘
သြော် . . . သူဌေးဖြစ်မဲ့အတွေးပဲ။ ကောင်းတယ်၊ ကောင်းတယ်၊ မင်းတစ်ယောက်ထဲ ပေါက်မယ်ဆိုရင်တော့ မနာလိုဘူး ပေါက်ရင်လည်း နှစ်ယောက်အတူတူဖြစ်အောင် စပ်တူထိုးကြမယ်လေ’
‘ဖြစ်တယ်သူငယ်ချင်း စပ်တူလည်းထိုးမယ်။ သပ်သပ်လည်းထိုးမယ်။ ထီထိုးပြီးရင် စိတ်ကူးတွေယဉ်ရတာ အတော်ကောင်းမှာပဲ သိန်းတစ်သောင်းပေါက်လို့ကတော့ ဘာမှလုပ်စရာတောင်မလိုတော့ဘူး။ ဘဏ်မှာ အပ်ထားလိုက်ရင် တစ်လကို ခြောက်ဆယ့်ရှစ်သိန်းရမယ် . . . ‘
‘ဘာအလုပ်မှ မလုပ်တော့ဘူးပေါ့။ ပျင်းစရာကြီး တို့ဆိုရင်တော့ ငါးထောင်ကို အရင်းအနှီးလုပ်ပြီး အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်မယ်။ ကျန်ငါးထောင်ကိုတော့ အိမ်တွေကားတွေ လိုချင်တာအကုန်ဝယ်လိုက်မယ်။ သိန်းတစ်သောင်းရှိပြီမှတော့ ဒီအဆောင်အခန်းကျဉ်းထဲမနေဘူး။
‘အေ…အလုပ်လုပ်တော့ မကျွမ်းကျင်တော့ အရှုံး ပေါ်မယ်။ အိမ်ဝယ်ထားတော့ အိမ်က ဘာမှ ထွက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကားကတော့ တစ်ရာနှစ်ရာထဲဆိုတော့ ပြော မနေတော့ပါဘူး။ မင်းလက်ထဲ သိန်းတစ်သောင်းအပ်လို့ကတော့ ကုန်မှာ ဟော ဘဏ်အပ်ထားတော့ တစ်ရက် နှစ်သိန်းကျော်ကျော် မသေမခြင်းစားပေတော့ပဲ။
‘အစွန်းတုံးအစတိုဆိုတာ မင်းမှအစစ်၊ တို့အရွယ်နဲ့ အဲဒီငွေတိုးပွားအောင် လုပ်ရမှာပေါ့။ သိန်းတစ်သောင်း ထီသာပေါက်ကြည့် တစ်ယောက်တစ်ဝက်ခွဲပြီး လုပ်ပြလိုက်ဦးမယ် . . . ‘
‘ထီက ထိုးတောင်မထိုးရသေးဘူး စိတ်ဝမ်းတွေ ကွဲနေတာတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။’
‘ဒါဆို တို့တွေ စိတ်တူကိုယ်တူ လုပ်နေကျဟင်းတွေချက်ရအောင်။’
ဈေးထဲမှာ လွယ်လွယ်ရတဲ့ ဗမာကြက်တစ်ကောင် ဝယ်လာတယ်။ အနေတော်တုံးပြီး ရေစင်စင်ဆေး၊ လက် ကျန်အမွှေးအမျှင်တွေအားလုံး ပြောင်စင်အောင်နှုတ်ပြီး ရေစစ်ထားမယ်။ ရေခြောက်သွားရင် ဆားလက်ဖက်ရည် ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ ငံပြာရည် စတီးဇွန်း နှစ်ဇွန်း၊ အရသာ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်၊ နနွင်းအနည်းငယ်နဲ့ ရော နယ်ထားမယ်။
ချက်မည့်အိုးထဲ စပါးလင်တစ်ချောင်း ပါးပါးလှီး၊ ကြက်သွန်ဖြူငါးတက်၊ ကြက်သွန်နီနှစ်ဥ၊ ငရုတ်သီးပွ သုံးတောင့် ရေစိမ်ပြီး ရောထောင်းထားတဲ့အဆာ၊ ဆီ နှစ်ကျပ်ခွဲသား၊ ကြိတ်ထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးနှစ်လုံးနဲ့အတူ ကြက်သားကို ရေခန်းသွားအောင် လုံးချက်ချက်မယ်။ ရေခန်းပြီး ဆီပြန်သွားရင် အသားမြုပ်အောင် ရေထည့်၊ မီးအရှိန် လျှော့ပြီး ကြက်သားနူးအောင် ချက်ပါမယ်။ ကြက်သားနူးရင် စပါးလင်တစ်ချောင်းအရှည် အတိုင်း ဓားပြားရိုက်ပြီး အထုံးလိုက်ထည့်မယ်။ အရသာအနေ တော်ဖြစ်အောင် မြည်းပြီး အိုးချခါနီးရင် ငရုတ်သီးစိမ်း အတောင့်ရှည်သုံးတောင့် ကွဲရုံထောင်းပြီး အုပ်လိုက်ပါ။ စပါးလင် ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ မွှေးတဲ့ကြက်သားဟင်းရပါပြီ။ အရည်သောက်စားချင်ရင် အရည်များများထည့်ဖို့ပါ။
ဘူးသီးကြော်အတွက် ဘူးသီးတစ်စိတ်ကြီးကြီး၊ လက်မလောက် အချောင်းတွေလှီးပြီး နေပူရင် တစ်နေပြလိုက်ပါမယ်။ နေမရှိရင် ခြောက်အောင်သုတ်ပြီး အကြော် မှုန့်တစ်ထုတ်၊ ဆားဆော်ဒါ၊ ငရုတ်ကောင်းစေ့နှစ်စေ့စာကို ရေနဲ့ ပျစ်ပျစ်ဖျော်၊ ဆားအရသာအနည်းငယ်စီ ဖြည့်ပြီး ဆီများများထဲကြော်ထားပါ။ ဘူးသီးကြော်ဆိုတာကို ဘယ်နေရာဝယ်စားစားရပေမဲ့ အိမ်မှာကြော်တဲ့ ဆီသန့်သန့် အခုကြော်အခုစား အရသာကိုတော့ ဘယ်ဆိုင်မှ မှီမယ်မထင်ပါဘူး။
ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိချက်အတွက် ခရမ်းချဉ်သီးငါးလုံး ကြိတ်ထားမယ်။ ချက်မည့်အိုးထဲ ဆီသုံးကျပ်သားထည့် ကြက်သွန်တစ်ဥစာ ညက်အောင်ထောင်းပြီး ဆီသတ်မယ်။ ကြက်သွန်ဖြူဖတ်တွေ ရွှေဝါရောင်တောက်လာရင် မီးအရှိန်လျှော့ပြီး စိမ်းစားငါးပိ နှစ်ကျပ်သား၊ ပုစွန်ခြောက် မှုန့် လက်တစ်ဆုပ်ထည့်ပြီး မွှေမယ်။ အနံ့မွှေးလာရင် ကြိတ်ထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး၊ စပ်တဲ့ ငရုတ်သီးငါးတောင့် ထပ်ထည့်မယ်။ ဆီပြန်လာရင် အနေတော်ထည့်ပြီး နံနံ ပင်အုပ်ပါ။ အလေးအပေါ့အငန်အရသာကိုတော့ လိုသလို ထပ်ပြီး ဖြည့်ပေးပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိချက် ဖြစ်ပါပြီ။ ဆလတ်တွန့်၊ ဂျူးမြစ်၊ ဂေါ်ဖီအတို့တွေနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။
မှိုဥသုပ်အတွက် မှိုဥတစ်ဆယ်သား၊ ရေစင်စင် ဆေးပြီး ငါးမိနစ် ပြုတ်မယ်။ အိုးချခါနီးရင် ကန်စွန်းရိုးနီ ငါးညွန့် ထက်ခြမ်းခွဲပါ။ ရောပြုတ်ပြီး ရေစစ်ထားမယ်။
စားခါနီးရင် မှိုဥပြုတ်တွေ၊ နှစ်ခြမ်းခွဲပြီး ကြက်သွန်စိမ်းပါးပါးလှီး နှစ်ဥ၊ ဆား၊ အရသာ၊ ငံပြာရည်၊ ပဲမုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူနီဆီချက်၊ ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့်၊ သံပရာရည် ထည့်ပြီး ဒီ့အပြင် အသုပ်နယ်သလို ဖွဖွနယ်လိုက်ရင် မှိုဥသုပ်ရပါပြီ။ နှမ်းစေ့နဲ့ ကြက်သွန်ကြော်ဖတ်လေးတွေ အသုပ်ပေါ်ဖြူးပေးပါ။ စားချင်စဖွယ် ဖြစ်သွားပါပြီ။
ထမင်းဟင်းဆိုတာကို တစ်ယောက်ထဲစားတာထက် အပေါင်းအဖော်၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းမ်ိတ်တွေနဲ့ စုပေါင်းပြီး စားတာက ပိုပြီးမြိန်စေပါတယ်။ တစ်ယောက် တစ်လက် စုပေါင်းချက်ပြီး ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ ဝေမျှစားကြရအောင်ပါ။
♦ ခရမ်းချဉ်သီး – ၅ လုံး
♦ စိမ်းစားငါးပိ – ၂ ကျပ်သား
♦ ပဲပိစပ်ဆီ – ၅ ကျပ်သား
♦ ငရုတ်သီး – ၅ တောင့်
♦ မှိုဥ – ၁ဝ သား
♦ ကန်စွန်းရိုးနီ – ၅ ညွှန့်
♦ ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ပဲမှုန့် – အနည်းငယ်
♦ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ ဆီချက်
♦ ဗမာကြက် – ၁ ကောင် (အနေတော်တုံး)
♦ ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
♦ ငံပြာရည် – စတီးဇွန်း ၂ ဇွန်း
♦ ပဲပိစပ်ဆီ – ၂ ကျပ်ခွဲသား